काठमाडौं, ३१ वैशाख । नेकपा एमालेका नेता एवं सांसद महेश बस्नेतले स्थानीय तहको निर्वाचन लगत्तै सत्ता गठबन्धनमा संकट आउने दाबी गरेका छन् । हिजो राति प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको ‘जनता जान्न चाहन्छन्’ कार्यक्रमका लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै नेता बस्नेतले भने, “स्थानीय तहको निर्वाचन भनेको बार वा इन्जियरिङ एसोसिएनको चुनाव होइन । कांग्रेसको छाता ओढेर […]
एमालेको इलाम अध्यक्षमा महेश बस्नेत निर्वाचित
इलाम – नेकपा एमालेको इलाम जिल्ला अध्यक्षमा महेश बस्नेत निर्वाचित भएका छन् । आइतबार राती सम्पन्न मतगणनाअनुसार अध्यक्षका प्रत्यासी डा. देवी क्षेत्री दुलालाई फराकिलो मतान्तरले हराउँदै बस्नेत अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन्। इलाम नगरपालिकाका प्रमुखसमेत रहेका बस्नेत डेढ महिना यता एमाले इलामको अध्यक्षको जिम्मेवारीमा थिए । तत्कालीन अध्यक्ष राम राना एमाले केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएपछि बस्नेतले अध्यक्षको […]
काठमाडौं, १९ पुस । नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले नेकपा (माओवादी केन्द्र) नेपाल र नेपालीको रुपान्तरणको यात्राबाट स्खलित हुँदै जीवन र मरणको स्थितिमा रहेको बताएका छन् । नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम नेपाली बहसका लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै नेता बस्नेतले भने, “आज माओवादी केन्द्र अस्तित्व रक्षाको स्थितिमा पुगेको छ । विगतमा पुँजीवादी, […]
सांसद महेश बस्नेत शंखधर साख्वाःको शालिकमा माल्यार्पण गर्दै
भक्तपुर, १९ कार्तिक । प्रतिनिधि सभाका सांसद महेश बस्नेत शुक्रबार राष्ट्रिय विभूति शंखधर साख्वाः प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मध्यपुरथिमि शंखधर चोकमा रहेको राष्ट्रिय विभूति शंखधर साख्वाःको शालिकमा माल्यार्पण गर्दै । तस्विर : रासस
अर्घाखाँची, भदौ २९ । नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकोे राजनीतिक यात्रा समाप्त हुन लागेको जिकिर गर्नु भएको छ । अर्घाखाँचीमा एमाले कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । नेता बस्नेतलले पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल र झलनाथ खनालले राजनीतिलाई नकारात्मक बाटोमा धकेलेको आरोप लगाउनुभयो । सभामुख अग्नि सापकोटाले […]
सभामुख सापकोटाविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव आउन सक्छ : महेश बस्नेत (भिडिओसहित)
काठमाडौं, २५ भदौ । नेकपा (एमाले) का प्रभावशाली नेता तथा सांसद महेश बस्नेतले सभामुखले तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन् । आज राति प्राइम टिभीबाट प्रसारण भएको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले एमालेलाई कमजोर पार्ने भूमिका खेलेको पनि जिकिर गरे […]
माधव नेपाललाई असफल बनाउन महेश बस्नेत सक्रिय
काठमाडौं, २ भदौ । राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी भएमा नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल नयाँ दल दर्ताको तयारीमा छन् । उनले मङ्गलबार नयाँ दल बनाउने घोषणा गरिसकेका छन् । तर, नेपाललाई एमालेका २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यको बलमा पार्टी फुटाउन नदिन अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षधर नेताहरु सक्रिय भएका छन् । […]
केपी ओलीजस्तो नेता यो धर्तीमा छ त ? : महेश बस्नेत (भिडिओसहित)
काठमाडौं, ४ साउन । नेकपा (एमाले) का प्रभावशाली नेता तथा पूर्वमन्त्री महेश बस्नेतले आफ्नो पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजस्तो नेता यो धर्तीमा नजन्मिएको टिप्पणी गरेका छन् । हिजो राति प्राइम टिभीबाट प्रसारण भएको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले भने,‘केपी ओली त नेकपा (एमाले) मा नवौं […]
ओलीलाई स्कर्टिङसहित बालुवाटारबाट बालकोटसम्म पुर्याउँछौं : महेश बस्नेत (भिडिओसहित)
महेश बस्नेत हिजो पोखरा पुगेका थिए ?
काठमाडौं, १६ वैशाख । नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेत हिजो पोखरा पुगेको चर्चा चलिरहेको छ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ्गविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमाथि मतदान हुने तय भएकै दिन उनी पोखरा पुगेको विषयले चर्चा पाएको छ । बस्नेत भने आफ्ना पिताको उपचारका क्रममा काठमाडौंमै थिए । उनको प्रदेश सांसद राजीव पहारीसँगको तस्बिर समेत सार्वजनिक भएको […]